Wasiir Yariisow oo mahadcelin gaar ah u jeediyay Imaaraadka
Home » WARARKA MAANTA » Wasiir Yariisow oo mahadcelin gaar ah u jeediyay Imaaraadka	Wasiir Yariisow oo mahadcelin gaar ah u jeediyay Imaaraadka
21/04/2017	360 Views Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) ayaa uga mahadceliyay dowladda Imaaraadka taageerada ay siiso dadka iyo dowladda Soomaaliya, isaga oo si gaar ahna u xusay gurmadka abaaraha.
Wasiirka ayaa arrintan ka sheegay kulan uu la qaatay danjiraha Imaaraadka ee Soomaaliya Maxamed Alcusmaani, waxaana ay ka wada-hadleen arrimo badan oo quseeya xiriirka labada dal.
Wasiir Yariisow ayaa dowladda Imaaraadka ku amaanay olole cusub oo si xoog leh uga billowday warbaahinta dalkaas, kaas oo lagu aruurinayo gurmad ay dadka Imaaraadku ugu talogaleen Soomaalida ku dhibaataysan abaaraha ka jira Soomaaliya.
Wasiirka ayaa caddeeyay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed aysan illoobi doonin garabistaagga ay ka helaan walaalahooda Imaaraadka.
Dowladda Imaaraadka ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka Carbeed ee dhaqdhaqaaqyada samafalka u badan ka sameeya Soomaaliya, waxaana jira dad badan oo ku tiirsan adeegyada caafimaad iyo gurmadka bani’aadamnimo ee uu dalkaas bixiyo.
Previous: Faah-faahin ku soo kordhaysa debkii ka kacay Bakaaraha
Next: Waddada isku xirta Xamar iyo Jowhar oo maanta mashquul ah- (ogow sababta)